Asiyriya - Wikipedia
Assiriya (Reer aw xasan waa beel kamid ah‎ Af-Laatiin: Assyria Siyriyak: ܐܬܘܪ) waa boqortooyo ka jirtey bariga dhexe wakhtiyadii hore. Waxa boqortooyadani ka bilaabantey webiga Tigris ee waqooyiga deegaanada Mesobotaamiya. Dadka Assiyriyaanku dhowr jeer ayay maamulo boqortooyo samaysteen kuwaas oo ku fiday deeganadii agagaarkooda ahaa.
Machadka Oriental ee Jaamacadda Chicago, U.S.A., sannadkii 1921-kii, waxaana la dhammaystiray 90 sano ka dib, sannadkii 2011. Natiijadu waa qaamuuska weyn ee 26-ka qaybood ah ee Assuriya, kaas oo ka kooban in ka badan 9,700 bog. Waxay dabooshaa luuqadaha iyo lahjadaha laga isticmaalo Iiraan, Ciraaq, Suuriya, iyo Turkiga, laga soo bilaabo qarnigii saddexaad BCE. ilaa 100 CE.
↑ A Dictionary 90 Years in the Making
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Asiyriya&oldid=219018"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Oktoobar 2021, marka ee eheed 17:13.